မိန်းခလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ခန္ဓာအချိုးအဆစ်ကျ သိပ်လှပီး စွဲဆောင်မှုကောင်းလွန်းပြန်ရင်လည်း မကောင်းလှဘူး။
အကျင့်စာရိတ္တတွေပျက်ပြားနေတဲ့ အရာရှိတွေအုပ်ချုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်မှမပျက်စီးရင် ဘယ်တိုင်းပြည်များပျက်စီးဦးမလဲ။
ပညာတက် ဥစ္စာပေါ ရုပ်ချော ဂုဏ်သရေရှိလူကြီးလူကောင်းတွေက ဘာဖြစ်လို့ အောက်တန်းကျတဲ့ လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးက လက်မခံသည့် ဖောက်ပြန်ခြင်းမျိုးတွေပြုနေကြတာလဲ?
ကိုသက်ထွန်း နဲ့ မမ အိမ်ထောင်ရေးသက်တမ်းတလျောက်မှာ မမဟာ ဟတ်ဟတ်ပတ်ပတ်မပျော်ခဲ့ရရင်တောင်မှ စိတ်တော့ဆင်းရဲခဲ့ရမယ်မထင်ဘူး။
ကိုသက်ဆွေကရော မမကို တကယ်ချစ်ရဲ့လား?
သူ့ရဲ့ဆန္ဒ ရမ္မက်အတွက် မမရဲ့အချစ်ကို မရ ရအောင်သူယူခဲ့တာလား?
ကိုသက်ထွန်းနဲ့ ရှိနေချိန်မှာ မမဟာ ပတ်ဝန်းကျင် လူတွေရဲ့အားကျခြင်း ၊အထင်ကြီးခြင်း ၊ ဖူးဖူးမှုတ် ခံရခြင်းတို့ဖြင့် မင်းမူနေခဲ့ရတယ်။
ကိုသက်ဆွေရဲ့နောက် လင်ပြစ် သားပြစ်၍ လိုက်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ပတ်ဝန်းကျင် လူတွေရဲ့ တံတွေးခွက်မှာပတ်လက်မျောရ ၊ လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးတာခံရ ၊ လူတွေရဲ့အပယ်ခံဘဝနဲ့ နေခဲ့ကြရတယ်။ လူထဲကလူဖြစ်ပေမယ့် လူတွေရဲ့အပယ်ခံရတဲ့ဘဝဟာ အင်မတန် ဆိုးရွားလှပါတယ်။
အရာအားလုံးကိုစွန့်ပြီး ကိုသက်ဆွေနောက် လိုက်လာခဲ့ပြီးနောက် ကိုသက်ဆွေသာသူ့ဘဝ သူ့ကမ္ဘာလို မျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံချစ်လာခဲ့တယ်။ကိုသက်ဆွေသာ သူ့ဘဝထဲကထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေးမိတိုင်း သူရင်နာရတယ်။ ကိုသက်ဆွေ မန္တလေး အလုပ်ကိစ္စသွားလို့ ရက်ကြာတိုင်း သူမဟာစိတ်မချဖြစ်လာတယ်။အငယ်အနှောင်းတွေများရှိနေမလားလို့ သံသယတွေဝင်လာတယ်။တစ်ခါတစ်ရံ မန္တလေးမှာရက်ကြာနေရင် သမီးအသည်းအသန်နေမကောင်းဖြစ်နေပီဟု စာပို့၍လိမ်ခေါ်တာများပင်ရှိခဲ့သည်။
ကိုသက်ဆွေကလည်း သူ့ရာထူး အာဏာ
သူ့သိက္ခာတွေအကုန် စွန့်ပြီး မမကိုပေါင်းသင်းခဲ့တာတောင် သူ့အပေါ် (အချစ်ပိုပြီး) သံသယ ဝင်နေတာကို ရင်ထဲမကျေမနပ်ဖြစ်နေခဲ့သည်။တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကိုယ်စီ သံသယတွေနဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ အေးခဲလာခဲ့သည်။ တစ်ယောက်တစ်ခွန်းစကားများ ရန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် ကိုသက်ဆွေဟာ သူ့အမေကို ပြင်ဦးလွင်ကိုလိုက်ပို့မည်၊ ရက်အကန့်အသက် ဘယ်လောက်ကြာမည် မသိနိုင်ကြောင်းကို မမအတွက်စာထားခဲ့သည်။ ကိုသက်ဆွေဟာ မမကိုထားခဲ့ပြီး အခြားတစ်ယောက်စီကိုထွက်သွားခဲ့လေပြီ ဟု မမဟာသံသယတွေနဲ့ပူလောင်နေခဲ့ရတယ်။ နာရီနှင့်အမျှ မိနစ်နှင့်အမျှ စက္ကန့်နှင့်အမျှ သူ့ခမျာစိတ်သောကရောက်နေရရှာသည်။
နောင်တတွေ ဗရပွနဲ့မမ။ မမဟာဦးသတ်ထွန်းကိုသတိရလာတယ်။ဦးသက်ထွန်းနဲ့သူမရဲ့သား "တူးတူး" ကိုလည်းသတိရတယ်။ တူးတူးကိုတော့အခုမှသတိသတိရသည်မဟုတ်ပါ။ မမဟာဦးသက်ဆွေနှင့်သမီးတစ်ယောက်ရခဲ့သော်ငြားလည်း ဦးသက်ထွန်းရဲ့သား တူးတူး ကိုသာအမြဲအချစ်ပိုခဲ့သည်။ ခွင့်လွှတ်ပါ ကိုကို ဆိုပြီးဦးသက်ထွန်းကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ချင်လာသည်။ ကိုကိုရဲ့ ခွင့်လွှတ်မှုကိုရယူချင်လာသည်။ မမဟာ လောကကြီးကိုရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်လာတယ်။ မမဟာ တချိန်က ရထားဘူတာမှာ ရထားကြိတ်ပြီးသေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ကို ပြန်မြင်ယောင်မိနေတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မမဟာ သူမရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုရှာတွေ့သွားခဲ့သည်။
တမလွန်ပါ။(တစ်ခါတစ်လေ သံသယဟာ အသက်ဝိဉာဉ်ကို နှုတ်ယူသွားတက်ပါတယ်)
သင်သာမမ နေရာမှာဆိုလျှင်. ???
သင်သာဦးသက်ဆွေ နေရာမှာဆိုလျှင် ???
ဦးသက်ထွန်းကတော့ တည်ငြိမ်တယ် ရင့်ကျက်တယ် လူကြီးဆန်တယ် ။
Zaw Htun Lin